အီရန် နှစ်သစ်ကူးတွင် အီရန်အစိုးရကို ထရန့် အပြင်းအထန် ဝေဖန် - Yangon Media Group
အီရန် နှစ်သစ်ကူးတွင် အီရန်အစိုးရကို ထရန့် အပြင်းအထန် ဝေဖန်
ဝါရှင်တန်၊ မတ် ၂ဝ
အီရန်ပြည်သူများ၏ နှစ်သစ်ကူးအခါသမယတွင် အမေရိကန်သမ္မတ ဒေါ်နယ်ထရန့်သည် အီရန်အစိုးရကို အပြင်းအထန်ဝေဖန် တိုက်ခိုက်လိုက်ကြောင်း မတ် ၂ဝ ရက် ရိုက်တာသတင်းကဆိုသည်။ နှစ်သစ်ကူးအခါသမယတွင် ကမ္ဘာတစ်ဝန်းမှ သန်းနှင့်ချီသော အီရန်ပြည်သူများ သာယာချမ်းမြေ့ပါစေဟု မိမိဆုမွန်ကောင်းတောင်း ပေးပါကြောင်း၊ သို့သော် အီရန်အစိုးရသည် ပြည်သူများ၏အကျိုး ကိုမဆောင်ရွက်ဘဲ ကိုယ့်ကိုယ်ကျိုး အတွက်သာလုပ်ဆောင်လျက်ရှိ ကြောင်း ထရန့်က ဝေဖန်သည်။
အီရန်တော်လှန်ရေးအစောင့် တပ်ဖွဲ့သည် ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာများကို ခိုးယူကာ ပြည်သူများကို ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်သည့်စစ်တပ်ဖြစ်ကြောင်း၊ ပြည်ပရှိ အကြမ်းဖက်သမားများကိုလည်း ငွေကြေးထောက်ပံ့လျက်ရှိ ကြောင်း ထရန့်ကစွပ်စွဲသည်။ အီရန်တော်လှန်ရေးအစောင့် တပ်ဖွဲ့သည် ဆီးရီးယားအစိုးရ တည်မြဲရန် ဒေါ်လာ ၁၆ ဘီလီယံ ထောက်ပံ့ကူညီခဲ့ကြောင်း၊ ဆီးရီးယား၊ အီရတ်နှင့် ယီမင်ရှိ စစ်သွေး ကြွများကိုလည်း ထောက်ပံ့ကူညီလျက်ရှိကြောင်း၊ ကိုယ့်ပြည်သူများ ဆင်းရဲမွဲတေနေသည်ကိုမူ လျစ်လျူရှုထားကြောင်း ထရန့်က ဝေဖန်သည်။ ထရန့်၏ ယခင်နှစ် အီရန်နှစ် သစ်ကူးသဝဏ်လွှာတွင်မူ နိုင်ငံ ရေးအကြောင်းအရာများ ထည့်သွင်းမပြောကြားခဲ့ပါ။ ယခုနှစ်သဝဏ်လွှာတွင်မှာမှ နိုင်ငံရေးအရ အပြင်းအထန်ဝေဖန်ထိုးနှက်ပြော ကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ထရန့်သည် ၂ဝ၁၅ ခုနှစ် အီရန်နျူကလီးယားသဘောတူညီချက်ကို လွန်စွာမနှစ်သက်သူဖြစ်သည်။ ထိုသဘောတူညီချက်သည် အီရန်နျူကလီးယားလက်နက် မပိုင်ဆိုင်ရေး မဟန့်တားနိုင်သည့်အပြင် အီရန်ကို အလျှော့ပေးလွန်းသည်ဟု ထရန့်က ယူဆသည်။ ထိုသဘောတူညီချက်ကိုမပြင်ဆင်ပါက အမေရိကန်နုတ်ထွက်မည်ဟုလည်း ထရန့်က ခြိမ်းခြောက် ပြောဆိုထားသည်။ အမေရိကန်၏ မဟာမိတ်အနောက်နိုင်ငံများကမူ ထိုသဘောတူညီချက်ကို ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားလိုသည်။
တောင်ကိုရီးယား သမ္မတဟောင်း လီ အား ဖမ်းဝရမ်းကို တရားရုံးက ပြန်လည် သုံးသပ်မည်
ဧဝရက်တောင် သန့်ရှင်းရေးအတွက် ယခုနှစ်အတွင်း လူသုံးသောင်း အမှိုက်ကောက်မည်
‘ပရိသတ် အချစ်ကို ခံယူနေရတဲ့ အချိန်မှာ သတင်း အမှားတွေကြောင့် ဆဲနေကြတာတွေ ရှိတယ်’ မေပန်းချီ
စစ်ကိုင်း ရွှေမင်းဝံပန်းခြံတွင် LED မီးသီး သန်း ၈ဝ ဖြင့် ကျင်းပသည့် LED ကမ္ဘာမီးအလှပြပွဲ ညစဉ် စည်က?
အစိုးရအုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းပုဂ္ဂိုလ်များ အဂတိလိုက်စား၊ မတရားလုပ်ခြင်းရှိက ပြည်သူများ တိုင်ြ??
H1N1 ဖြစ်ပွားနေသည့် ကလေးငယ်များအတွက် ရန်ကုန်ကလေးဆေးရုံကြီး (ဟယ်ပင်)တွင် ကုသဆောင်ဖွင့်လှစ်